ဘဝကထူးဆန်း APK ကိုဒေါင်းလုပ်ဖြစ်ပါသည် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Android အတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
apk Apps နှင့်ဂိမ်းများ
ထိပ်တန်း PPssPP အားကစားပြိုင်ပွဲ
လူကြိုက်များသော Apps ကပ
ဘဝကထူးဆန်း APK ကိုဒေါင်းလုပ်ဖြစ်ပါသည်
Life Is Strange isa5-half episodic recreation that allows participants to rewind time and have an impact on the past, လက်ဆောင်, and future through revolutionary story-based selection and consequence games.
Watch the story of Max Caulfield,asenior who discovers that she will be rewinding time while rescuing her best buddy, Chloe Worth. The couple quickly discovers the mysterious disappearance of their classmate Rachel Amber and discoversadark facet of life in Arcadia Bay. အချိန်အတောအတွင်း, Max should quickly study thatachange in the past can usually lead toadevastating future.
– တစ်ဦးက fantastically written ဖက်ရှင် ခရီးသွားခြင်း အနားယူခြင်း;
– Rewind time to alter the course of အခါသမယ;
– A number of endings relying အပေါ် the alternatives you make;
– Distinct, licensed indie soundtrack that includes Alt-J, Foals, Angus & Julia Stone, Jose Gonzales and အပို.
Completely on Android, အားကစား comes with full controller ထောက်ပံ့. An all-new ဓါတ်ပုံ mode ကို သငျသညျပေးနိုင်ပါတယ် take ဗီဒီယိုဖိုင် ကဲ့သို့ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ အစောပိုင်းကထက်, modify them with filters and simply share them. ထို့အပြင်, သင် ... နိုင်ပါသည် seamlessly share your progress on social media, နှင့် ဆနျးစစျ သင့်ရဲ့တစ်ဦးချင်းစီ story decisions နှင့် mates.
**Solely ထောက်ပံ့ ယူနစ် အလုပ်လုပ်ကိုင် အန်းဒရွိုက် 6.သုည နှင့် ထောက်ပံ့ OpenGL သုံး.1. Requires ARM 64 နှင့်တစ်ဦး minimal of two GB of RAM**
Examples of ယူနစ် forabeneficial ကစား ကျွမ်းကျင်မှု. Decrease-end ယူနစ် could have technical points, resulting in တစ်ဦး ထက်နိမ့် preferable ကျွမ်းကျင်မှု, or not ထောက်ပံ့ အားကစား in any respect.
– Samsung Galaxy S7 and up, စောငျ့ရှောကျ5ထ
– OnePlus သုံး & 3T က
ဘဝကထူးဆန်းတယ်, တစ်ဦးချင်းစီ'' s ကို Alternative Award winner ယင်းအပေါ် Worldwide cell အနားယူခြင်း ဆုပေးပွဲ 2018
“One of the best games I’ve played in years.” – Forbes မဂ္ဂဇင်း
ရှစ် / 10 “Rare and valuable.” – edge
ရှစ် / 10 “… has the potential to outperform both Telltale Games and Quantic Dream.” – Metro
ဘဝကထူးဆန်းတယ် by SQUARE ENIX Ltd
Instagram ကို Lite ကို APK ကိုဒေါင်းလုပ်
Dropbox ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
FireDL APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ဝင်္ & ပိုများသော APK ကိုဒေါင်းလုပ်
ROBLOX APK ကို Android အတွက် Download
ပုံစံ: 1.00.229 (100061)
ဗိုလ်လုပွဲ နောက်ဆုံးပေါ်: ဇူလိုင်လ 19, 2018
ဖိုင်မှတ်တမ်း အတိုင်းအတာ: 34 mb
Pinterest အပေါ်မျှဝေဖို့ကိုနှိပ်ပါ (ဝင်းဒိုးအသစ်ဖွင့်လှစ်)
tweet ဒါဟာ pin
Android အတွက် Hole ခုနှစ်တွင်ဓာတ်ပုံ – APK ကိုဒေါင်းလုပ် – မိုဘိုင်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
တက္ကစီဂိမ်း APK ကိုဒေါင်းလုပ် – Android အတွက်အခမဲ့ခြင်း simulation GAME
အဘယ်သူမျှမကန့်သတ်ကို Android ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမြန်နှုန်းဘို့လိုအပ်ပါတယ် + အချက်အလက် 2.9.1 APK ကို – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
အကြှနျုပျ၏ဖွယ်ပြောစကား Angela APK ကို v3.1 ကို Download လုပ်ပါ:++ Talking Tom အခမဲ့ download
အရိပ် Fight31.9.3 အပြည့်အဝ Apk + mod + Android အတွက်ဒေတာများ – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
ကံကြမ္မာ / ဂရန်းအမိန့် .apk ဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
KeepVid APK ကိုဒေါင်းလုပ် – Android အတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အခမဲ့ KeepVid Video Downloader
NX Stream Player ကို .apk ဒေါင်းလုပ် – မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
ဂီတ & audio
Ultimate Ninja မီးလောင် APK ကိုဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး…
bit APK ကိုဒေါင်းလုပ် | သည်အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
Zynga Poker APK ကိုဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
Temple Run2APK ကိုဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး…
မူပိုင် © 2019.